အမှာတော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အမှာတော်
Posted by ဂျစ်စူ on Feb 24, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 57 comments
သဂျီး တစ်တောင်လောက်ရှိတဲ့ တောက်တဲ့ကို တစ်လံလောက်ဖြစ်လာဖို့ဆွဲဆန့် တတ်သလို
ခင်ဗျားတို့ လဲ ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်ကြပါစေ။
အူးသစ်မင်းကြီး ပညာ၊ကြင်ယာနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့အားလုံးကောင်းကျိုးအတွက် ဦးဆောင်တတ်သူဖြစ်သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ အချိန်မီပြင်ဆင် ဆည်းပူး လေ့လာ မျှဝေ ရှာယူနိုင်ကြပါစေ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး)ကြီး ကင်မရာတစ်လုံး ကိုင်မိရင် တစ်ဖျက်ဖျက် လိုက်ရိုက်တတ်ပြီး လူနဲ့ မလိုက်အောင်
သွက်လက်လှုပ်ရှားနိုင်နေသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါပြီး ဖလန်းဖလန်း ထနေနိုင်အောင်
ဥိးပါလေရာကြီး ခလေးတွေဘယ်ကျောင်းထားရမလဲ စာရင်းကောက်နေသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ
ကိုယ့်ရင်သွေး အနာဂတ်လှပဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားကြဖို့ လိုပါတယ်။
အူးကြောင်ကြီး သဂျီးကို နင်လားငါလား ဖင်ပိတ်ငြင်းနိုင်သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ အကုန်မသိတောင်
အရာရာနှံ့ စပ် လေ့လာ ထောက်ပြနိုင်ကြပါစေ။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီချီးပု နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ချီးပေသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ သူ့ လို တစ်တုံးဆို တစ်တုံး
ဘလောချက်ကြီး မဒမ်ချောကို သစ္စာရှိပြီး တုံနေအာင်ချစ်သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ ရွာကို တုံနေအောင်ချစ်တတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
ဦးမှိုကြီး ဘလောချက်ကြီးကို မသိမသာကြပ်သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ ဂွင်ထဲဝင်တာနဲ့ခြေထိုးခံတတ်အောင်
ဘီလူးကြီးတို့ အဖွဲ့တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေး ဆင်းသလို ခင်ဗျားတို့ တွေလဲ တန်ပြန်ချေပ ငြင်းခုန် ပြောဆိုနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ။
မောင်ပေကြီး ကျောက်အကြောင်းတစ်ဘက်ကမ်းခတ် နားလည်ပြီး ဘောကြောင်းနှံ့ စပ် ရမ်းတုတ်
ဟောကိန်းထုတ်သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ ပညာ တစ်ခုထဲနဲ့ တန့် မနေပဲ ဒီ့ထက်ပိုတဲ့ပညာတွေကို
လေ့လာလိုက်လောင်း အဲ..လေ့လာလိုက်စား မျှဝေ နိုင်အောင်လုပ်ကြပါ။
ဦးစိန်သော့ကြီး စာကလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ နိုင်သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ ကိုယ်နဲ့ ဘ၀ခြား၊အဆင့်ခြားတဲ့
အလွှာပေါင်းစုံနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ချစ်ခင်ကြင်နာနိုင်အောင် ကြိုးစာပါ။
ရွှေတိုက်စိုးကြီး အနီးစပ်ဆုံး ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ ထပ်တူကျတဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်ကို ရှာနိုင်ခဲ့သလို
ခင်ဗျားတို့ လဲ နေနဲ့ လ ရွှေနဲ့ မြ ဖြစ်နိုင်မဲ့ ၀ါသနာတူ၊စိတ်တူ၊ကိုယ်တူ လက်တွဲဖော်ကို ရှာနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ။
နှူးဘာကြီး ဆန်ဖရန်စစ္စကိုက ကောင်မလေးရဲ့ပေါင်က အမှတ်အသားကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်သလို
ခင်ဗျားတို့ လဲ အနုပညာမျက်စိရှိရှိနဲ့ လိုရာဆွဲတွေးပြီး မြင်အောင်ခံစားတတ်နိုင်ကြပါစေ။
နိဂိမိ၇၇ ကြီး ဆိုဂျူးနဲ့ ချဉ်ဖတ် တွဲမြည်းနေသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ ဘီအီးနဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက် တွဲမြည်းတတ်ကြပါစေ။
ကိုရင်စည်သူကြီး အဘအိမ်က ဟင်းတစ်ခွက်ရတိုင်း ရွာထဲ လိုက်ကျွေးသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ တစ်ခုခုသိတိုင်း
ကိုအီးတီကြီး နှူးဘာရဲ့ပို့ စ်တိုင်းမှာ စာလုံးတစ်လုံး အမြဲရှာတတ်သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ ဘယ်ရောက်ရောက်
အခြောက်အဖွဲ့ ကြီးက ဂိုဏ်းသားတွေဖြစ်တဲ့ အံချာတုံးတို့ ၊ဖျဲသီးတို့ ၊ကြီးမိုက်တို့တစ်တွေ
ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လိုက်ခြောက်နေကြသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ စိုလိုက်ခြောက်လိုက်နဲ့ 
ဘ၀ကို မိုးတိမ်လို ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
အလင်းဆက်ကြီး မော်ဒန်တွေ ဇောက်ချလေ့လာနေသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ ပညာတစ်ခုကိုဇောက်ချ
ကြောင်ဝတုတ်ကြီး အီးကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ အီးကို အကျိုးရှိရှိ ပါထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
အမတ်မင်းကြီး ခေါင်းတလားတွေ ကြိုရှာနေသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ မသေခင် ကောင်းတာတွေလုပ်ထားကြပြီး
ကောင်းကောင်းသေနိုင်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါ၊လူဆိုတာ သေမျိုးတွေချည့်ဖြစ်တယ်။
ကိုထွန်းဝင်းလတ်ကြီး တိုက်ဂါးဝုဒ်နဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ တိုက်ဂါးသဂျီးနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလောက် တွဲရိုက် နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ၊
ကိုထူးဆန်းကြီး ဟိုတယ်ရေချိုးခန်းလုံခြုံရေးတွေ လေ့လာနေသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ ကိုယ်သွားတည်းမဲ့ဟိုတယ်ရဲ့
မမတို့ ရဲ့ သတ်ပုံအဖွဲ့ ကြီး စာဖတ်နေရင်း အမှတ်တမဲ့ သတ်ပုံအမှားတွေ ရှာရှာဖတ်သွားကြသလို
ခင်ဗျားတို့ လဲ အမှတ်တမဲ့သွားလာရင်း အမှန်တရားတွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
အန်တီပဒုမ္မြာုကီး အိမ်သာတွေ ဆေးခဲ့သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ သူ့ အီး ကိုယ့်အီး မခွဲခြားပဲ
အများကောင်းကျိုးအတွက် တိုင်းပြည်သန့် ရှင်းဖို့ အတွက် အနစ်နာအရွံရှာ ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ။
အရီးလေးခင်လတ်ကြီး ကြယ်နှစ်ပွင့်တက်လာတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘာမှမကျွေးခဲ့သလို
ခင်ဗျားတို့ လဲ ရာထူးတက်ရင် သိုသိုသိပ်သိပ်နဲ့ဖွက်စားကြ ..အဲလေ…မာန်မာန မမောက်ကြပါနဲ့ ။
တီချယ်ကြီး ရွာထဲပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ တာဝန်တွေ၊၀တ္တရားတွေပြီးတာနဲ့ 
ရွာထဲဝင် ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ။
ဖွားဆူးကြီး တစ်ခါတလေ ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့မုန့် လုံးရေပေါ်အကွက်နင်းနေသလို
ခင်ဗျားတို့ လဲ အခြေအနေကြည့်ပြီး ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် လုပ်နိုင်အောင် အတုယူပါ။
ဒေါ်ဝေေ၀ကြီး ဆင်းရဲသားလေးတွေကို အခမဲ့ နီးပါ စာသင်ပေးသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ ကျုပ်ကို
အခမဲနီးပါး ဘီယာတိုက် အဲလေ..အားနဲသူကို အားပေးလို့ ကူနိုင်ကြပါစေ။
ဒေါ်ပူးခ်ျကြီး ဆတ်ဆတ်ထိမခံလို့ အပျိုကြီးစာရင်းထဲဝင်နေသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ
မှန်ကန်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ကိုယ်ကျင့်တရားအတွက် နဲနဲမှ အထိစွန်းမခံပါနဲ့ ၊ထမင်းငတ်ရင် ငတ်ပါစေ၊
ချာတူးလန်ကြီး အနီတွေပေခဲ့ရတာကို နမူနာယူပြီး ခင်ဗျားတို့ လဲ ပလုတ်ပလောင်း၊ပါးစပ်ဖောင်း နေတဲ့လူ၊
ဖင်ပိတ်ပြီး လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကို ရအောင်ရှောင်တတ်ကြပါစေ၊ဒါမှ အနီမပေ၊အီးမမှန်ပဲ ဘ၀မှာ
သန့် သန့် ပြန့် ပြန့်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မအီတုံးကြီး စားသောက်ဆိုင်သွားတိုင်း အိမ်သာတွေတောင် အလွတ်မပေးပဲ လေ့လာစပ်စုခဲ့သလို
ခင်ဗျားတို့ လဲ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် လေ့လာမှတ်သားစပ်စု ပြုစုနိုင်ကြပါစေ။
ဒေါ်မိုးဇက်ကြီး ကြွက်နီတာရဲတွေစားပြီး ခလေးတွေနဲ့ငြင်းခုန်ဆော့ကစားနေသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ
ဂျယ်လီစားပြီး အိမ်ကမြေးတွေမြစ်တွေနဲ့ကခုန်ဆော့ကစားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါ။
ဒေါ်သဲနုအေးကြီး ကပုန်းကျော်နဲ့အပြန်အလှန်ချဲနိုင်သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ အမှန်တရားအတွက် ဘယ်သူ့ ကိုမဆို
ဒေါ်နွယ်ပင်ရဲ့အမ၀မ်းကွဲကြီး မတရားမှုကို အမြစ်ဖြုတ် ဖြေရှင်းခဲ့သလို ခင်ဗျားတို့ လဲ မတရားတာမှန်သမျှ
အင့်ခနဲ အွတ်ခနဲနေအောင် တော်လှန် ဆွဲညှစ် လွှင့်ပစ် နိုင်အောင် သတ္တိမွေးကြပါ။
ကပုန်းကျော်ကြီး သတင်းစာ တစ်စောင်းဖတ်ပြီး တိုက်ပြိုတယ် လျှောက်အော်နေသလို
ခင်ဗျားတို့ လဲ အမှန်တရားမသိ၊မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ပဲ ရမ်းသမ်း မအော်မိကြပါစေနဲ့ ။
အပေါ်တွေမှာ ပြောခဲ့တဲ့ အမှာစကားများ ခင်ဗျားတို့ နားယောင်ရင် သေတောင် အီးမပန်းဘူးမှတ်ပါ။
ရေးနေရင်း ဘာဆက်ရေးရမှန်းမသိ..အီးကလဲပါချင်လာတာနဲ့ 
နှစ်တုံးပါမိသွားရင် ပိုပါမိတဲ့ တစ်ဝက်ကို ဖျဲသီးတို့ အဖွဲ့ ကိုကျွေးလိုက်ပါ။
Diaper လေးဝတ်ထားပါဆို ခဏခဏအိမ်သာမသွားရအောင်
ရွာသူရွာသားတွေ သတိနဲ့နေပါ မာမီပေါက်မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေတယ်
ရွာထဲ သည်ကိစ္စ အတော် ခေတ်ထနေတယ်…
ကိုအင်ဂျီး လည်း ခေတ်မီအောင် ..ဟိုနေ့ကပြတဲ့ ဟင်းလျာလေး
ဘာသာပြန်ပီး တင်ပေးရမား ဟင်င်င်င်
ထွက်နှုန်းကောင်းနေတဲ့ ဒေါ်စိန်ပေါက်ကြီးလည်း အလဟသတ် မဖြစ်ရဘူးပေါ့ …
လေးစားလောက်ပါပေတယ်… စိန်မျောက်မျောက်ရယ်… နောက်ဆိုအီးပါချင်ရင် ခွင့်ပြုချက်တောင်းစရာမလို အောင်… မလန ကနေနင့်ကိုအချိန်မရွေးကြိုက်ရာနေရာမှာချီးပါခွင့် လက်မှတ်ကို
ပတ်ပိုစ့်နောက်ကျော ဒုတိယစာမျက်နှာမှာ.. တရားဝင်ပါမစ် ပူးတွဲပေးလိုက်ပီ… ပါစေ…
ပါစေ.. ဒါပေမယ်.ပါပီးရင်ကို.ပစ္စည်းကို ကိုမကြေညာရ… အိမ်သို့ပြန်သယ်သွားရမြီ… ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတော်အတွက်.. ရည်ရွယ်ကာ.. လွတ်တော်ထဲ က ငပျင်းများကို တနေ့နည်နည်း ကျွေးရမြီ…
ဗီအိုင်ပီ အီးပန်း ပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် နေရာတကာ ပါခွင့်ပြုကြပါ အရပ်ဂဒို့ ရေ
မုန့်လုံးရေပေါ် သိုင်းကွက်နင်းမိနေတာလား.. သိုင်းကွက်နင်းရင်းနဲ့ စိန်ပေါက်ပေါက် ခေါင်းတော့ မနင်းမိပါဘူးနော်.. တကယ် အိပ်တော့မလို့ အရုပ်တောင် ပြောင်းထားတယ် အိပ်မောကျနေတဲ့ ပုံလေးပြောင်းပြီးတော့ အိပ်နေသည်လို့ စာရေးထားလိုက်ပြီ.. အခြေအနေအရ ရွာထဲကို ပြန်ဝင်လာစရာ ကိစ္စပေါ်လို့ ရွာလည်ရင်းနဲ့ မကြာခင် စုပေါင်းလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် စည်းရုံးရေး ဆင်းရအုန်းမယ်။ ဟိဟိ..
တစ်လက်မထောင်ခဲ့သဗျို့။ ကိုယ်နဲ့ ဘ၀ခြား သူ၊ အလွှာပေါင်းစုံနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ချစ်ခင်ကြင်နာနိုင်အောင် ကြိုးစာပါ ဆိုတာကတော့ ရွာထဲမှာ ဆြာဂီကြီးက လုပ်နိုင်ပါသဗျာ
သရဲခေါ်ရိုက်လိုက်၊ အမဲ ခေါ်ရိုက်လိုက်နဲ့ သူက တရဲချစ်၊ လူခင်ပေါတယ်။
ဒေါ်စိန်ပေါက်ကြီး အရူးမကြီးကို နှင်ထုတ်သလို
ဒေါ်စိန်ပေါက်ကြီး အီးပန်းနေသလို မပန်းကြရအောင်
တွေ့ကရာ လျှောက်မစားကြပါနဲ့ …….
စနေကြီး အချိန်နဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီး နာမည်ပြောင်းနိုင်သလို
ခင်ဗျားတို့ လဲ အမြန်ပြောင်းနိုင်အောင် လေ့လာကြပါ။
ခင်ဗျားတို့ အီးကြောင့် တစ်ရွာလုံး မနံပါစေနဲ့ 
အမ် … နာတို့ကိုများ အခြောက်အဖွဲ့တဲ့ …
ဒီငတိ ကိုတော့ နာလည်း ပြန်ဆော်လိုက်ဦးမှ …
သူလည်း နားမလည်၊ သဂျီးလည်း နားမလည်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ဆော်လိုက်မယ် ..
စူးရိန် ပူးရောက် အခြူးရောက် …
ကိုင်း .. မှတ်ကရော ……..
အလဲ့ ကနေ့တော့ ကပေါက်ဖော်ကြီးခင်ဗျားတို့.ကျုပ်တို့ နဲ့ ပုံမှန်လေကျ ပြန်ရပြီပေါ့..
အမှာတော်ချွေနေပြီ ဆိုတော့ကာ ဘယ်တော့လောက်..အခေါင်းပို့ပေးရမှာတုန်း
ညီမလေးစိန်ပေါက် အမှာတော်ချွေထားလို့ ကိုအမတ်မင်းကြီးတော့ အလုပ်များတော့မှာပဲ …
ဒါနဲ့ အခုထိ ဝမ်းတော်လားနေတဲ့ ရောဂါ မပျောက်သေးဘူးထင်တယ် ရွာထဲက
ဆရာထက်ဝေးတို့ ဆရာAKKO တို့ဆီ သွားမကုဘူးလား …………….
များက နဂိုထဲက သရဲကြောက်တာ ဘီလူးမတော့ လင်မတော်ပါရစေနဲ့ တော့
ဒက်ပိုးလား အဖိုး လား ဘာလား တော့မသိဘူး အဲမင်းသားလေးဆို တော်သေး မာမီပေါက်ရဲ့
ပေါက်ပေါက်စိန်ရေ သတ်ပုံပဲ မှားပါစေ အတွေးမမှားပါစေနဲ့
အမှာတော်ပဲ ပါးပါ ဘယာကြော် ပဲနဲ့ တွဲမစားပါနဲ့ ထပ်ပန်းနေမှာစိုးလို့ပါ။
သများနာမည်မပါဘူးမှတ်တာ။ စူးရိန် ပူးရောက် ပူးရောက်တို့များပြောပြောချင်ပေါင်။ တကတဲ့။ ကပုန်းကျော်နဲ့ ကမသတ်တော့ဘူး။ သူ့ကိုဘေးမဲ့ပေးလိုက်ပြီ။ စူးရိန် ပူးရောက် ပူးရောက်နှင်လိုက် တဲ့အရူးမနဲ့သူနဲ့ယှဉ် ကြည့်လိုက်တော့သိပ်မကွာတာနဲ့ လွှတ်ထားလိုက်တော့တယ်။ နောက်သူဘာရေးရေး မပြောရေးချာမပြော။
စကားအတင်းစပ် ဒေါ်စိန်ပေါက်ဝမ်းပိတ်သွားအောင် ပွေးဂိုင်းရွက်သုတ်စား။ အရွက်ကိုဟင်းချိုသောက်။ အရွက်ကိုထမင်းနဲ့မြှပ်စား။ ပျောက်လတံ။
ရေဆာတိုင်း ပြုတ်ရည်လေး သောက်ရင် ပိုကောင်းမယ်။
စကားနောက် တရားပါ သွားမှဖြင့် ဒုက္ခ
အောင်မယ်ငီး။ အောက်ကမြင့်ကျန်ခဲ့တာပါဟ။ ပျောက်လတံ့လို့ပြောတာ။ အရှိုက်ထိသွားတာတော့များလဲမသိ။
ကိုပေါက်ဖော်တို့က မပါရင် အရှင်း
ပါရင်တော့ အခင်းပြည့်အောင် ပါတာပဲ
ိထို့ကြောင့် ပေါက်ဖော်ဟု ခေါ်သည်လို့ ပြောရမယ်
ကျွန်တော်က ကိုချောကို ကြပ်တာ မဟုတ်ရပါဘူး ဗျာ
သူ့ရဲ့ သီလ သမာဓိကိုလေးစားပြီး ရွာအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာ စေတနာကို အထင်ကြီးလို့ သူ့ဆီမှာ ဆည်းကပ်ပြီး ပညာယူနေတာပါ ဗျာ ၊ ကြပ်တယ် ဆိုတဲ့ စကား မသုံးပါနဲ့ စိတ်မကောင်းလို့ပါ
အလဲ့ တယ်ဆိုတဲ့စာတွေပါလား….. သူများအကြောင်းကို အတင်းပြောရင်း ဟင်းမျောရွာသွားတဲ့ စိန်ပေါက်ပေါက် ရောက်ရာဘ၀မှ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ…..
အလဲ့ တယ်ဆိုတဲ့စာတွေပါလား….. သူများအကြောင်းကို အတင်းပြောရင်း ဟင်းမျောရှာသွားတဲ့ စိန်ပေါက်ပေါက် ရောက်ရာဘ၀မှ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ…..
သင့်ကြောင့် အီးမပေ ပါစေနှင့်
ကိုစိန်ပေါက်ပေါက် ရေးတတ်တယ်ဗျာ ဖတ်အားကိုပြတာပဲ
အော .. ဒေါ်စိန်ပေါက် ဒေါ်စိန်ပေါက် …. တချိန်လုံး ပန်းမမဖြစ်နေတာတောင် ပို့စ်တွေ မလွတ်ပုံထောက်လျှင် … အိမ်သာထဲ ၀ါယာလက်မိတယ်ထင်ပါ့
ခင်ဗျားတို့ လဲ အီးပါပြီး ဖင်ကို ရေဖျန်းနိုင်ကြပါစေ
ဘယ်က အခြောက် အစုတ်ပလုတ်ကမှာဒုံး
ရွာထဲဝင်လာတဲ့ အငုံးလေးတွေ အထင်လွဲအောင် ပြောနဲ့ 
အမယ် သူများဟာသူများ ပုပုလေးနဲ. ချောချောလေးနှစ်ယောက် ချစ်ကြကြိုက်ကြတာကို နာလိုဖြစ်နေတယ်တူက ဟိဟိ
စိန်ပေါက်ပေါက်ကို ဖင်မနိုင်ပဲ တလှစ်လှစ် မသွားရအောင် ခင်ဗျားတို.လဲ Dr.P ၀တ်ထားကြ ဟဟဟဟ
မိစိန်ပေါက်တို့ နှံ့စပ်ပုံများ အောချလောက်ပါပေတယ်။ တော်တော်စာဖတ်တယ်။ ၀မ်းပိတ်ဆေး ၀ယ်သောက်အုံး။ တော်ကြာခဏခဏပန်းမှဖြင့် အရမ်းလှတဲ့ ပန်းမမ မဟုတ်ပဲ ။ အရမ်းခြောက်တဲ့ ပန်းပေါက်ပေါက်အဖြစ် ရာဇ၀င်တွင် သွားမယ်။ အမှာစာတော့ရေးပြီဆို သတိထား ယပ်တောင်ပါကမ်းနေရအုံးမယ်။ အမတ်မင်းရဲ့ခေါင်းတလား နဲ့ ရွှေတိုက်ပြောနေကြ ကားဒီးလက်စ် စီးနေရအုံးမယ်။ သတိသတိ
အို ဘွာတေး ဟေး ဟေး
တွားမဲ့ တွား သူကြီးဆီဘဲ တွား –၊ ရှေးဂုဘို့လေ နော်၊
ရွာမှာအီး မပန်းအောင် ရယ်တယာအဆောင်ပေးမယ် — ပြောင်းဖူးရိုးကိုဆောင် — တိန်။
ပူးရောက် ပူးရောက် လို့မအော်နဲ့ ရွာထဲက မယ်ပုက သူ့ခေါ်တယ်မှတ်ပြီးလာနေအုန်းမယ်နော်။
မိန်းမက နဂိုထဲက ခိုးခိုင်းနေတာ..နေရမရှိလို့ ငြိမ်နေတာနော့..
ဂယ်ခိုးလာမှ ဖျဲသီးတို့ အိမ်တစ်လှည့်၊အူးပေါက်တို့ အိမ်တစ်လှည့်၊မောင်ပေတို့ အိမ်တစ်လှည့်၊ဒေါ်ပူးခ်ျတို့ အိမ်တစ်လှည့်၊
သဂျီးဆီက တစ်သိန်းရရင်တော့ မိန်းမယူတော့မယ်ဗျာ
ကျေး စေခိုင်းရမှာက … ရိုးတယ်ထင်တယ် ….
ပေဖူးလွှာ .. ပေဖူးလွှာ … အမှာတော် ပါးရမှာက … စိတ်ထဲမှာ .. မလုံမလဲရယ်မို့ ….
ဖရဲသီးကို … အောင်သွယ် ခိုင်းရမယ် …
(တွံတေးသိန်းတန် သီချင်း ဆိုသွားပါကြောင်း … )
ကိုပေါက်(မန္တလေး)ကြီး ကင်မရာတစ်လုံး ကိုင်မိရင် တစ်ဖျက်ဖျက် လိုက်ရိုက်တတ်ပြီ
ဖရဲမက နေရာအနှံ့ အ၀ လိုက်ပို့ပါမယ်။
နင်နဲ့ ကိုမှိုဇိုမိ နဲ့ ၀ိုင်းကြပ်နေတာနဲ့
ငါလည်း လှည့်လို့ကို မရတော့ဘူး။
အဲဒါ ဦးဘလက်ကြီး ၀တ်လည်တာ ဟဟဟဟဟ
ဟဲဟဲ. ကိုစိန်ပေါက်ပေါက်ရဲ့ အမှာတော်မှာ ကျနော်မပါဘူးဗျို့ ။
သူ့ ထည့်မရေးမိတာကို ပျော်နေသေးတယ်..
ကိုသန်းထွဋ်ဦးကြီး သံတွဲတစ်ခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် ထင်ရှားကျော်ကြားသလို ခင်ဗျားတို့ လဲ
မှတ်ချက်။ ။ အီးမဟုတ်ပါ
အခု မင်း ရေးထားတာ တရားဝင် စာရင်း ပေါက် (၃၇) ကွဲ့။
တော်ကြာ တစ်ခြား အဖွဲ့ရဲ့ နံပါတ် နဲ့ မှားနေဦးမယ်။ ;-)
တစ်ရွာလုံးမှာ နာမည်တွေကို ပြောင်းပြန် လှန် လိုက်ရင် မင်းနဲ့ အရီး ရဲ့ အမည်ပြဿနာက အထင်ရှား ဆုံးဖြစ်နေပါပေါ့။
မန်းတလေးဂေဇက်၏ တစ်ဦးတည်းသော မြန်မာနိုင်ငံ တာဝန် ခံ ပေါက်ဖော် ကြီး ၊ သဂျီး ဆီ မှ စလာရီ မြန်မြန် တိုးပေးခံရပစေ ။
အယ်ဒီပြာပေါက် နားကပ်ကြီးနဲ့ လှသလို ခင်ဗျားတုိ့လည်း နားကပ်နိုင်ပါစေ။(ဘယ်နားကပ်ချင်လည်းတော့ သိဘူးနော်)
ဘယ်နားမှ မကပ်ချင်သေးဘူးဗျ …
ရွာသူားတချို့လည်း.. ဆေးသောက်ရင်.. လှုပ်သောက်နိုင်ကြပါစေ…။
ဒေါ်စိန်ပေါက်ကြီး တစ်ရွာလုံးကို သူတစ်ယောက်တည်းနဲ့ ဒိုင်ခံပြောသလို …..
ခင်ဗျားလည်း အားလုံးကို တစ်ယောက်တည်းက ချုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
သို့သော် ဒေါ်စိန်ပေါက်လည်း သတ်ပုံမမှားဝံ့ရှာပါ။
ထို့ကြောင့် နိဂုံးချုပ်ရမည်ဆိုလျှင်-မည်သို့ပင်ဆိုစေ သတ်ပုံအဖွဲ့အထက်တွင် မည်သူမျှ မရှိရ။
(အဲဒါ ဦးဘလက်ကြီး ၀တ်လည်တာ ဟဟဟဟဟ :D) လို့ ပြောတဲ့
စီန်ပေါက်ပေါက် အရူးမ မောင်းထုတ်နိုင်သလို သဲနု…. အဟွတ် နှင့် ရွာသူားများ လည်း ……အ…..ရ…. အ ဟွတ် ဟွတ်…… မောင်း အ ဟွတ် ဟွတ် ……. just joke ….. :grin:
အီးပန်းနေ တဲ့ မိစိန်ပေါက် လို ရွာသားတိုင်း အီးပန်း ခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ…
စိန်ပေါက် မချိန်သောက်သလို ဇိမ်ရောက်နိုင်ဂျပါစေ..။